लमजुङमा तीन दिनमा तीन जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
२०७७ श्रावण ३१ शनिवार
श्रावण १७, २०७७ शनिबार
लमजुङ, साउन १७ गते । लमजुङको चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमै तीन जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । पछिल्लो साता ३ दिनमै ३ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको बेंसीसहरस्थित लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले जनाएको छ ।
बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार लगातार तीन दिनमा तीन जनामा डेङ्गु देखिएको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठका अनुसार बुधबार बेंसीसहर नगरपालिका ३ का १७ वर्षीया महिलामा डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । बिहीबार बेंसीसहर नगरपालिका ९ का २१ वर्षीय पुरुषमा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको र शुक्रबार बेंसीसहर नगरपालिका ८ का २९ वर्षीय पुरुषमा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
टाउको दुख्ने र उच्च ज्वरो आउने समस्यापछि अस्पतालमा आएका तीनै जनाको परीक्षण गर्दा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको अस्पताल प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका प्रमुख अमर दवाडीले पछिल्लो समय तीन जनामा डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको र उनीहरू सबै लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताउनुभयो ।
दवाडीका अनुसार यसअघि असार ३० गते मङ्गलबार क्व्होलासोंथर गाउँपालिका वडा नं. २ मालिङ घर भएर बेंसीसहर नगरपालिका वडा नं. ७ घलेगाउँचोक बस्ने २९ वर्षीया महिलामा डेङ्गु देखा परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै पाँच जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दवाडीले बताउनुभयो । एडिस जातको पोथी लामखुट्टेले दिउँसोको समयमा टोक्दा उसको शरीरमा भएको भाइरस मानव शरीरमा सर्ने हुँदा डेङगु रोगबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग एक मानिसबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने भएकाले सचेत रहन स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ । लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने र पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी र पानी जम्ने बोटल कागज, प्लाष्टिक नष्ट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सफा ठाउँमा सफा पानिमा लामखुट्टेले सन्तानको वृद्धि गर्ने र यसको बासस्थान शहरी क्षेत्रमा वढि हुने हुने उहाँले बताउनुभयो । सात/सात दिनमा यसको लार्भा उत्पादन हुने भएकाले हरेक सात सात दिनमा पानि जम्ने ठाउँ खोजेर नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रत्येक घर घरघरबाट टोल टोलबाट लमखुट्टेको बासस्थान खोजेर नष्ट गर्न सकियो भने यो रोगलाई छिटो नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मृतक सङ्ख्या बढे पनि मृत्युदर तुलनात्मक रुपमा कम
‘साउदीमा कम्पनीहरू सुचारु भइसके, हामी काममा छौँ’
नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालका ५० स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा, सेवा प्रवाह प्रभावित
बिहीबार मृत्यु भएका बाराका दुई पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
मास्कका सारथि वीर, जसले बाडेँ २७ हजार मास्क
कोरोनाका मृतकले पाउँदैनन् मलामी, पाउँछन् सलामी
सिन्धुपाल्चाेक पहिराे अपडेटः ३६ जना बेपत्ता (फोटो फिचरसहित)
सवारी पास रोकिएपछि कर्मचारी भए फुर्सदिला
कोरोनाविरुद्ध रुसले बनाएको खोपले काम गर्ने अमेरिकाको विश्वास
विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई करोड तेह्र लाख नाघ्यो
भारतमा आज ७४ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै
निषेधाज्ञापछि जनजीवन ठप्प
लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गरिने
विद्यार्थी रिहाइको माग
आजदेखि लागू हुने गरी विभिन्न गतिविधिमा निषेधको आदेश
गोकर्णमा निर्माण भइरहेको निजामती स्मारक अन्तिम चरणमा